အမျိုးဝါဒ – Min Thayt
အမျိုးသားရေးနဲ့ ဘာသာရေးကို တွဲပြီးပြောကြပါတယ်။ ကိုလိုနီခေတ်မှာ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို စတင်လိုက်တာက အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ပညာ လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် နိဒါန်းအစမှာ ပါခဲ့တဲ့ ပညာဟာ ဘယ်နေရာမှာ ပြုတ်ကျကျန်ရစ်ခဲ့လည်း မသိပါ။ သည့်နောက်ပိုင်း အမျိုးသားရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောကြရေးကြတဲ့ရေးသားပြောဆိုချက်တွေမှာ အမျိုးသားရေးနဲ့ ဘာသာရေးကို ဇောင်းပေးတွဲဖက်တာတွေ့ရ တယ်။
• အမျိုးကိုချစ် ဘာသာကို မပစ်နဲ့…
• အမျိုးသားရေး သွေးမအေးကြနဲ့….
• အမျိုးမှန်မှ အဖိုးတန်…
• မြေမြိုလို့ လူမျိုးမပြုတ် ၊ လူမြိုရင် လူမျိုးပြုတ်မယ်….
• အမျိုးမချစ်ရင် အမျိုးမစစ်…
• ဘာသာကွယ်ရင် လူမျိုးကွယ်မယ်…
• ဘာသာပျောက်ရင် လူမျိုးပျောက်မယ်…
• အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်စရာ..
• အမျိုးကို မထိနဲ့… အမျိုးထိ ဓားကြည့်….
• အမျိုး ဘာသာ သာသနာ….
အမျိုးသားရေးဝါဒကို အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် (၂) မျိုးခွဲလို့ရပါတယ်။ လူအပေါ်အခြေခံတဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့ နိုင်ငံအပေါ် အခြေခံတဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒဆိုပြီး အခြေခံနှစ်မျိုးအပေါ် တည်ပြီး ခွဲလို့ရတယ်။ လူအပေါ်အခြေခံ တဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒဟာ သွေးသားဗီဇစစ်မှန်ရေးကို အဓိကထားပြီးဇောင်းပေးတယ်။ သွေးသားရင်းခြာစစ်စစ် ဖြစ်ရေးကို ဇောင်းပေးစဉ်းစားတယ်။ သွေးနှောခြင်းကို လက်မခံ။ သွေးနှောလျှင် အမျိုးမစစ်ဟု သတ်မှတ်သည်။ မအေမိဘက ကိုယ့်လူမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်ခြင်း မဖြစ်ခြင်းကို အထူးဦးစားပေးတယ်။ လူအပေါ်ကျောက်ချထားတဲ့အမျိုး ဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက နိုင်ငံအပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံဆိုတာဟာ ပြုပြင်စီရင်ထားချက်တွေနဲ့ စုစည်းသိုင်းဖွဲ့ထားတဲ့ လူမှုစိတ်ဝိညာဉ်ယူနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံက တော့၊ လူဦးရေ ၊ နယ်မြေ၊ အစိုးရနဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာဆိုတဲ့ အချက် (၄) ချက်ပြည့်ရင် နိုင်ငံတစ်ခုလို့ ယူနစ် သတ်မှတ်ထားတယ်။ အမျိုးသားရေးဝါဒ ထောင့်ကနေကြည့်ရင် နိုင်ငံဆိုတာ လူအုပ်စုတွေကို နိုင်ငံရေးစိတ် ဝိညာဉ်တစ်ခုနဲ့ သိုင်းဖွဲ့စုစည်းထားတဲ့ အသိုင်းအဝန်းတစ်ခုလို့ ယူတယ်။
လူအပေါ်အခြေခံတဲ့ အမျိုးဝါဒဟာ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့သဘောဆန်တယ်။ နိုင်ငံကို အခြေခံတဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒက တော့ အနည်းငယ် ကျယ်ပြန့်တဲ့သဘောဆန်တယ်။ စိတ်ဝိညာဉ်ချင်း နှီးနွယ်နီးစပ်တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ခိုင်မာ ကျစ်လစ်အောင်လုပ်ပြီး အမျိုးသားနိုင်ငံတစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။
လူသားဟာ သွေးသားဗီဇအားဖြင့် ရောနှောနေတတ်တာဖြစ်လို့၊ အမျိုးစစ်မှန်ရေးဆိုတာ ကြားကောင်းပေမယ့် လက်တွေ့မှာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အကြောင်းကတော့ ကမ္ဘာ့လူမျိုးနွယ်စုတွေက အချင်းချင်း သွေးနှောနေကြလို့ဖြစ် ပါတယ်။ လူသားဝါဒဆိုတာ ကျယ်ပြန့်တဲ့သဘောရှိတယ်။ အမျိုးဝါဒကတော့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ လူမျိုးတွေအားလုံးဟာ ဗီဇသွေးသားဓာတ်ခံတွေ ရောစပ်နေတာဖြစ်ကြောင်း မနုဿဗေဒ ပညာက ဖော်ထုတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ မနုဿဗေဒ ပညာဟာ ဘယ်လောက်ကျယ်ပြန့်သလဲဆိုရင် ကမ္ဘာ့ ရှေ့ခြမ်းနဲ့ ကမ္ဘာ့နောက်ခြမ်းမှာ ရှိတဲ့ လူမျိုးတွေကို ဒီအန်အေ စစ်ချက်တွေ အဆင့်ဆင့်လုပ်ပြီး သုတေသန ပြု ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့တောင်ခြမ်းနဲ့ ကမ္ဘာ့မြောက်ခြမ်းမှာ ရှိတဲ့ လူမျိုးတွေကိုလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း သုတေသနစစ်ချက်တွေ ထုတ်ပါတယ်။ အဖြေက အားလုံးက ထင်မှတ်မထားတဲ့ အဖြေဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေဟာ ဒီအန်အေတူတာတွေ ဘယ်လိုဘယ်မျှ ရှိနေကြောင်း အဖြေထွက်လာတယ်။
လူသားဝါဒအရကြည့်ရင် ကမ္ဘာကြီးထဲက လူအားလုံးဟာ အမျိုးအနွယ်မတော်စပ်သူဟူ၍ မရှိဘူး။
သူ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းက တွေးထင်သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားတဲ့စီရင်ချက်အမြင်အတိုင်း အကဲဖြတ်သတ်မှတ်ပါ တယ်။ လူတွေအစဉ်အလာအရ ၊ လူမှုပြဌာန်းချက်အရ သတ်မှတ်ထားချက်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး အမျိုးအနွယ် တော်စပ်ခြင်း မတော်စပ်ခြင်းကို သတ်မှတ်တယ်။ ကာမယှက်စပ်ပြီး လိင်အားဖြင့် သွေး သား ရင်းနှီးပြီး မွေးဖွားလာတဲ့ ကလေးရဲ့ မိခင်နဲ့ ဖခင်ကို ကြည့်တယ်။ ကလေးဟာ မိဘကို ရွေးချယ်လို့ ရနိုင် ပါသလား။ မိခင်နဲ့ ဖခင်ဟာလည်း တချိန်က ကလေးဖြစ်ခဲ့လို့၊ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ သူ့မိခင်၊ သူ့ဖခင်ကို ရွေးချယ်လို့ ရပါသလား။
လူသားသမိုင်းအားဖြင့် နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ ရှည်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ လူသားမျိုးနွယ်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်လို ရပ်တည်ရှင်သန်ခဲ့ပါသလဲ။ အမျိုးဝါဒဆိုတာ သဘာဝအတိုင်းဖြစ်တည်လာတဲ့ စိတ်သဘောအယူအဆမဟုတ် ပါ။ လူ့ပယောဂနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အယူအဆသာဖြစ်ပါတယ်။ လူကို လူလို့ပဲ မြင်ခြင်းအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်း သော ကမ္ဘာကို တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
• ကမ္ဘာကြီးမှာ ငြိမ်းချမ်းသော ကာလရယ်လို့ မရှိခဲ့ဘူး….။
• စစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလနဲ့ စစ်ဖြစ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ကာလပဲ ရှိတယ်….
• ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကာလဆိုတာကို သတ်မှတ်ချင်ရင်တော့….
• စစ်ဖြစ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ကာလဟာ လက်တွေ့စစ်ဖြစ်နေသေးတာ မဟုတ်လို့ အဲသည့်ကာလကို ငြိမ်းချမ်းသောကာလလို့ ဆိုလိုချင်ရင် ဆိုလိုနိုင်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းချင်ရင် စစ်ကို ပြင်ပါ…. ဆိုတဲ့ အယူအဆမျိုးလည်း ရှိတယ်။ လူတွေဟာ ဗီဇအရ အရိုင်းဆန်တယ်။ တိုက်ချင်ခိုက်ချင်ကြတယ်။ လွှမ်းမိုးအနိုင်ယူလိုတယ်။ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးလိုတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် အနိုင်ယူလွှမ်းမိုးရေးကို အမြဲတမ်း ကြိုးစားနေကြတယ်။ ဒီလို အရိုင်းကမ္ဘာဆန်တဲ့ တောတွင်း ဥပဒေသဖြစ်ထွန်းတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ တန်ပြန်တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ စစ်ကို မလွဲမသွေ ပြင်ဆင်ကြရမယ်လို့ယူဆသူတွေ ရှိ တယ်။ စစ်ကို ပြင်ဆင်ကြဖို့အတွက် လူတွေဟာ လူအချင်းချင်း ဘယ်လို စုရုံးသိမ်းသွင်းကြသလဲ။ လူတွေဟာ စစ်ထဲမှာ ပါဝင်လာနိုင်ဖို့ သူတို့ရဲ့တက်ကြွနိုးကြားစိတ်တွေကို ဘယ်အရာတွေက ဆွဲခေါ်လှုံ့ဆော်နိုင်သလဲ။ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခြင်း အယူအဆတွေ များစွာ ရှိပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးဝါဒကို တည်ဆောက်ပြီး စစ်ဆီကို ဆွဲခေါ်ဖို့ ကြိုးစားနိုင်တဲ့ သဘောတရားဟာ ရှိသလား….။
လူသားဟာ ဗီဇအရ… ကြောက်စိတ်ရှိတယ်။ စိုးရိမ်စိတ်ရှိတယ်။ မလုံမခြုံ ခံစားရတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လုံခြုံမှုအတွက် လူမှုအသိုင်းအဝန်းတွေမှာ လူမှုစည်းမျဉ်းတွေ၊ လူမှုစည်းဘောင်တွေ၊ လူမှုအရင်းတွေ ကို တည်ဆောက်ယူကြတယ်။ ဘာသာရေးဟာ လူတွေရဲ့စိတ်လုံခြုံမှုအတွက် ဖြေသိမ့်စရာဖြစ်လာတယ်။ စစ်တပ်ဟာ လူသားနေထိုင်မှုဘဝအတွက် အကာအကွယ်ပေးတဲ့ အရံအတား ခံတပ်ဖြစ်လာတယ်။ လက်နက် ကိုင်တပ်ဟာ လူသားရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုကို ပေးပြီး ဘာသာရေးဟာ လူသားရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုကို ပေးပါတယ်။
ဘုန်း / လက်ရုံး
လက်နက်ကိုင်သူဟာ အင်အားကြီးလာပြီး အုပ်ချုပ်သူနေရာကို ရောက်လာတယ်။ အုပ်စိုးသူနေရာကို ရောက်လာတယ်။ ပဒေသရာဇ်ခေတ်၊ ဘုရင်စနစ်တွေကို ကြည့်ပါ။ အင်ပါယာတွေ ၊ တိုင်းပြည်၊ နိုင်ငံတွေရဲ့ သမိုင်းကို ကြည့်ပါ။ တပ်ရှိသူဟာ ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ တပ်ပိုင်သူဟာ ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ တပ်အင်အားကြီးသူဟာ ဧကရာဇ်ဖြစ်တယ်။ စစ်နိုင်သူက ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ ဘုန်းနဲ့ လက်ရုံးဟာ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ လက်ရုံးကြီးသူဟာ ဘုန်း ကြီးတယ်… ဆိုတဲ့ ယူဆချက်အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရုံးအားကြီးအောင် တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ဘယ်လို လူမှုကိရိယာတွေကို အသုံးပြုသလဲ။ ရှေးယခင်က တော့… လက်နက်နဲ့ တပ်ရှိသူ ဘုရင်ဟာ သူ့အာဏာစက်နဲ့ အတင်းအဓမ္မ ပြည်သူကို စစ်ထဲဆွဲခေါ်လို့ရတယ်။ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ကမ္ဘာမှာ စစ်ထဲကို ပြည်သူပါလာအောင် အတင်းအဓမ္မ လုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် စစ်ကို ကိုင်ထားသူဟာ လူမှုလက်နက်တွေကို အသုံးပြုလာရတယ်။ လက်ရုံးအင်အားကို စုစည်းအားကောင်းစေဖို့၊ လူတွေ ပါလာမှဖြစ်မယ်။ ဆွဲခေါ်လို့ ပါလာတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ သူ့အလိုလို ပါလာစေရမယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆွဲငင်ရေး နည်းနာတွေကို သုံးတယ်။ ဒါကတော့ လူမှုနည်းနာနဲ့ ဆွဲစုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုနည်းနာထဲမှာ လူသားတွေ ငြင်း လို့ မရတဲ့ အချက်က …. အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းဟာ သူ့ကို မွေးထုတ်ခဲ့တဲ့ မိဘ၊ သူ့ကို ကျွေးမွေးခဲ့တဲ့ မိဘ၊ သူ့ဇာတိချက်မြုပ် နဲ့ သူ မှီတင်းနေထိုင်ခဲ့ တဲ့ ရေမြေအပေါ်မှာ တမ်းတလွမ်းမောစိတ် ရှိတယ်။ ဒါဟာ အမျိုးဝါဒကို တည်ဆောက်ဖို့အတွက် အဓိကအမှတ် အသားဖြစ်ပါတယ်။ လူသားဖြစ်တည်မှုကို ငြင်းလို့ မရတဲ့အတွက် မွေးဖွားရာ ဇာတိပုညနဲ့ အမျိုးအဆွေတွေကို လူမှုစိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုဖန်တီးပြီး ဆွဲဆောင်ပါတယ်။ ငါ့နိုင်ငံ… ငါ့လူမျိုး… ငါ့တိုင်းပြည်… ငါ့ဘာသာ… ငါ့သာသနာ…. ဆိုတဲ့ ယူဆချက်အမြင်တွေကို လူတွေထဲမှာ နက်ရှိုင်းအောင် အမျိုးမျိုး ရိုက်သွင်းပါတယ်။ အဲသည်လို ရိုက်သွင်းတဲ့နေရာမှာ အကောင်းဆုံးနဲ့ အကျယ်ပြန့်ဆုံး အသုံးချတဲ့ လက်နက်ကတော့ ဘာသာရေး လက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးအားဖြင့် အမျိုးကို ဆွဲဆောင်တယ်။ ဘာသာရေးအားဖြင့် စိတ်ဝိညာဉ်ကို ဆွဲ ဆောင်တယ်။ အာဏာစက်နဲ့ ဓမ္မစက်ဆိုတာ တွဲပြီး လာပါတယ်။ သာသနာပိုင်ဆရာတော်တွေဟာ သာသနာပြု မင်းကို လိုလားပြီး၊ သာသနာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်စေလိုပါတယ်။ မင်းစိုးရာဇာရဲ့အကာအကွယ်ပေးမှုကို ရတဲ့ သာသနာဟာ တည်တံ့တယ်၊ အဓွန့်ရှည်တယ်၊ တည်မြဲတယ်၊ ကြီးပွားတယ်၊ စည်ပင်တယ်…. လို့ ယူဆ တယ်။ အာဏာကလည်း သာသနာရဲ့ထောက်ခံမှုရရင် တရားဝင်မှု မြင့်တယ်။ သာသနာဟာ လူထုရဲ့စိတ် ဝိညာဉ်ကို ဆွဲစုထားတာဖြစ်တာကြောင့် သာသနာရဲ့ထောက်ခံမှုရတာဟာ လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရတာနဲ့ အတူ တူပါပဲ။ လူထုထောက်ခံမှုဟာ တရားဝင်မှုကို မြင့်ပေးပါတယ်။ ဒါဟာ အာဏာ နဲ့ သာသနာရဲ့ အပြန်အလှန် အမှီသဟဲပြုရပ်တည်မှုကို ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုး – ဘာသာ – သာသနာ
ကိုလိုနီခေတ်မှာ နယ်ချဲ့ကို တော်လှန်ဖို့ စတင်ခဲ့တဲ့ အမျိုး – ဘာသာ – သာသနာ – ပညာ လှုပ်ရှားမှုဟာ လွတ် လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက် ကြီးစွာသော အထောက်အပံ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကနဦးအစ အကြောင်းတရားတွေကို စုစည်းပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝိုင်အမ်ဘီအေမှ – ဂျီစီဘီအေ ။ ဂျီစီဘီအေမှ အမျိုးသားကျောင်းတွေ ပေါ်လာ၊ အလုပ်သမား လယ်သမားသပိတ်တွေ ပေါ်လာ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေပေါ်လာပြီး တို့ဗမာအစည်း အရုံးကို ထူထောင်နိုင်တဲ့အထိ တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။
ဝိုင်အမ်ဘီအေဟာ ဘာသာရေးအသင်းအနေနဲ့ လူထုရဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ကို စုစည်းပေးခဲ့တယ်။ ဘာသာရေး ကို အကြောင်းပြုပြီး တိုင်းပြည်လူထုရဲ့ လူမှုအခွင့်အရေးတွေအတွက် အရေးဆိုလှုပ်ရှားပေးခဲ့တယ်။ နောက် တစ်ဆင့်တက်လာပြီး ကိုလိုနီအင်္ဂလိပ်အစိုးရနဲ့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု လုပ်လာနိုင်တဲ့အထိ ကြီးကျယ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေ မယ့် အတွင်းစည်းကနေ လှုပ်ရှားတဲ့သဘောသာဖြစ်တယ်။ ပြင်ပကို ဖောက်ထွက်ပြီး လုပ်နိုင်ခဲ့တာ မရှိခဲ့ဘူး။ ပြင်ပကို ဖောက်ထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းကတော့ တို့ဗမာအစည်းအရုံးဖြစ်ပါတယ်။ တို့ဗမာအစည်းအရုံးက သခင်လူငယ်တွေဟာ ပြည်ပအကူအညီကို ရှာပြီး လက်နက်ကိုင်တော်လှန်တဲ့ အဆင့်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အစည်းအရုံးဘဝမှာ နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်ထားပြီး လှုပ်ရှားတယ်။ ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့အဆင့်မှာတင် ရပ်နေတဲ့ ဝိုင်အမ်ဘီအေလို မဟုတ်တော့ဘူး။ ခေတ်အမြင်ရှိလာတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ လိုလားချက်ကို မြှင့်ပစ် နိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး လက်နက်ကိုင်တပ်ကို ဖွဲ့စည်းပြီး မြန်မာ့တပ်မတော်ကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အဆင့်ထိ ဖြစ်လာတယ်။
နိဂုံးကောက်ချက်က ဘာလဲဆိုရင်…. ဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာ အမျိုးဝါဒကို ဖော်ပြပြီး အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဉာဏ်ရှိရှိနဲ့ လှုံ့ဆော်နိုင်ရင် နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်ရှိလာနိုင်တဲ့ အသင်းအဖွဲ့တွေ ပေါ်လာပြီး အမျိုးသားတော်လှန်ရေးကြီးကို အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ သက်သေသာဓကကို ထုတ်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့အမျိုးသားတော်လှန်ရေးကြီးကို ကြည့်ရင် ပါဝင်တဲ့အဓိက ဇာတ်ကောင်တွေကို သိဖို့ လိုပါသေးတယ်။
ဝိုင်အမ်ဘီအေကို ဦးဆောင်ခဲ့တာက… ခေတ်ပညာတတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဂျီစီဘီအေကို ဦးဆောင်ခဲ့တာက ပညာတတ်မျိုးချစ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ပညာ လှုပ်ရှားမှုကို ဘေးက ပံ့ပိုးပေးတဲ့ သတင်း စာတွေ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ သူရိယသတင်းစာနဲ့ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တိုင်းပြည် အတွင်းမှာ ဝံဿနုအသင်းတွေ မြို့တိုင်းနယ်တိုင်းမှာ ပေါ်ထွက်လာတယ်။ သည့်နောက်ပိုင်းမှာ အလုပ်သမား လယ်သမား လှုပ်ရှားမှုတွေ ပေါ်ခဲ့ပြီး အလုပ်သမားသပိတ် လယ်သမားသပိတ် ကျောင်းသား သပိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။ တို့ဗမာအစည်းအရုံးဟာ နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ အသင်းအဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး တို့ဗမာအစည်းအရုံးကို အခြေခံပြီး တော်လှန်ရေးပါတီ တစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့ အနေအထားထိရောက် လာတယ်။ အဲဒါကတော့ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ အမျိုးသားရေးကျောင်း တွေကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့ ပညာတတ်လူငယ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဟာ နဂါးနီစာပေအသင်းကို ထူ ထောင်ပြီး တော်လှန်ရေးဝါဒကို သွတ်သွင်းကြတယ်။ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအတွေးအခေါ်တွေကို ဝါဒဖြန့် ကြတယ်။ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စာပေရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ တော်လှန်ရေး … စတဲ့အရေးတွေ အကြောင်း ပေါင်းစုံနိုင်ခဲ့လို့ မြန်မာပြည်ဟာ လွတ်လပ်ရေးကို ရခဲ့တယ်။
လူအများစုဟာ ဉာဏ်တိမ်တာဖြစ်တာကြောင့် လူသားဝါဒကို လက်မခံနိုင်ကြဘူး။ လူသားဝါဒကို မြင်အောင် ကြည့်ဖို့အတွက် ပညာလိုတယ်။ ပညာဟာ သာမန်မည်ကာမတ္တအဆင့်ထက် ပိုလိုတယ်။ လူအားလုံးကို ပညာရှိ အောင် လုပ်မပေးနိုင်တာမို့ လူသားဝါဒဟာ ကမ္ဘာမှာ မှေးမှိန်နေတယ်။ မဖြစ်ထွန်းဘူး။ လူပိန်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အမျိုးဝါဒကသာ ကမ္ဘာမှာဖြစ်ထွန်းတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နိုင်ငံတည်ဆောက်သူတွေဟာ လူအများစုနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အမျိုးဝါဒကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ကြပြီး တိုင်းပြည်ကို တည်ဆောက်ဦးဆောင်ဖို့ ကြိုးစားကြတယ်။ အဲသည်လို ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ ပညာနဲ့ ယှဉ်တဲ့ အမျိုးဝါဒဟာ ကမ္ဘာလောကကြီးကို မျှခြေကိုက်စေပြီး၊ ပညာနဲ့ မယှဉ်နိုင်တဲ့ အမျိုးဝါဒဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ကမောက်ကမဖြစ်စေတယ်….။ သာဓကတွေ များစွာ ကမ္ဘာမှာ ရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ကြပါကုန်…..
နံနက် ဝး၃၀
၂၆ ၊ အောက်တိုဘာ ၊ ၂၀၁၉ ။
Tagged Nation, Nationalism, Nature and Nature, Political Animal, Race
Previous post ဘဝပင်လယ်ဆီမှ /
Next post မြန်မာ့လမ်းပွင့်